Six Senses CEO ao amin'ny Douro River sy drafitra fanitarana hafa.
Q & A miaraka amin'ny CEO Neil Jacobs
Mangataha toro-hevitra amin'ny mpizahatany izay mifantoka amin'ny fiaramanidina avo lenta mba hanomezana anarana ny marika tia mandray vahiny maneran-tany. Six Senses Hotels Resorts Spas dia mety ho tonga saina.
Ny orinasan-trano fandraisam-bahiny hotely fandraisam-bahiny Bangkok dia misy toeram-pitsangatsangana 11 sy spa 31 eo ambanin'ny Six Senses, Evason sy Six Senses Spas anarana.
Seven Senses Resorts sy Spas any Azia sy Pasifika dia any Thailand, ao amin'ny nosy Yao Noi ary ao Koh Samui.
Any Vietnam dia misy ny toerana ahitana an'i Ninh Van Bay sy ny nosy Con Dao.
Ary Six Senses Laamu dia miorina ao The Maldives
Ao Shina, ny Seven Senses Qing Cheng Mountain dia mameno ny tranokalan'ny UNESCO momba ny Lovan-javaboary sy ny natiora Dujiangyan.
Ary fahenina enina Ny Douro Valley dia miorina ao amin'ny trano fandraisam-bahiny namboarina tamin'ny taonjato faha-19 izay nipoitra teny amin'ny havoana iray izay nanarona ny voaloboka feno hantsana tany amin'ny Lohasahan'i Douro sy ny renirano etsy ambany.
Any Oseana Afovoany sy Afrikana, ny Six Sense Zighy Bay dia any Oman.
Six Senses Zil Pasyon dia hita ao amin'ny nosy Felicite tsy miankina, nosy fahadimy lehibe indrindra any Seychelles.
Seven Senses Spas dia fantatra amin'ny fahasalaman'izy ireo, ny fanadiovana ary ny fitsaboana tsara tarehy. Seven Senses Spas dia miasa ao amin'ny toeram-pitsangatsanganana any amin'ny hotely sy toeram-ponenana malaza, ary amin'ny sambo iray sy ny efitrano fianarana voalohany amin'ny seranam-piaramanidina roa lehibe.
About.com dia nanana fahafahana hiresaka tamin'i Neil B.
Jacobs, tale jeneralin'ny orinasa.
Q: Ny Seven Senses Douro Valley, Portiogaly dia nanintona ny sain'ny maro hatramin'ny nanokafana tamin'ny 2015. Lazao anay ny momba izany.
A: Tena mazava izahay. Nividy ny orinasa fotsiny izahay 3.5 taona lasa izay, enim-bolana no nanomboka, ary dia toy izany ihany no tao anatinay nandritra ny telo taona. Ny tanjonay dia ny manala anay amin'ny maha-marika Aziatika sy Middle East Atsinanana anay ary lasa maneran-tany.
Ireto misy ampahany sasany eto amin'izao tontolo izao dia tena avo lenta amin'ny lisitr'izy ireo ary i Eoropa dia iray amin'ireo. Hitanay ihany koa ny ankamaroan-toeran-kafa any Amerika sy Afrika.
Q: Douro Valley no hotely voalohany any Eorôpa. Inona no nanapaanao an'io toerana io?
A: Efa nisy toeram-pitsaboana tany Eoropa nandritra ny taona maro. Efatra amin'ny toerana dimy ao Eoropa amin'izao fotoana izao. Hitanay ity trano tranainy ity izay trano fandraisam-bahiny tao Douro. Ny Douro dia iray amin'ireo faritra tsara tarehy indrindra any Eorôpa. Tena hafahafa izany. Manana ny renirano mihazakazaka mamakivaky an'i Espaina ianao. Ny divay dia tsara indrindra any Eoropa. Mpahalala. Amin'izao fotoana izao dia manomboka mahazo ny fankasitrahana mendrika azy ireo izy ireo.
Avy any New York ianao dia manana tsy an-kiato any Porto, izay tanàna kely mahafinaritra indrindra. Avy any Lissabon dia afaka manidina any Porto ianao na mandeha fiara ao anatin'ny telo ora. Matetika aho no mitondra fiara. Mora kokoa noho ny mandeha any amin'ny seranam-piaramanidina.
F: Inona no tokony nataonao mba hanovana ny hotely misy?
A: Manana spa be ny trano fandraisam-bahiny. Toerana 20 000 kilaometatra toradroa io. Ny endriny dia nahatsiravina. Tsara tarehy ilay trano fa natao ho toy ny hotely Bali. Nahita ny mety isika. Nakatona ny fifanarahana, dia nakatony izahay. Nitondra mpamoaka avy any NY izahay, vehivavy iray antsoina hoe Clodagh hanamboatra azy io.
Naveriny ny efitrano manontolo tao anatin'ny sivy volana. Rehefa naverina indray tamin'ny jona 2015 dia efa tena misy ifandraisany. Mankalaza ny faritra divay ao amin'ilay lohasaha izany. Ny fitaovana sy ny zava-drehetra ampiasaina ao anaty trano dia tena voajanahary. Manana kisary tsara tarehy eo an-toerana izahay. Portiogey dia firenena manana kolotsaina manana fitaovana tsara.
F: Any Portiogaly amin'ny ankapobeny dia mafana tokoa ny mpizaha tany Amerikana.
A: Io no toerana mety amin'ny fotoana mety. Tena sarobidy tokoa i Portiogaly. Isika angamba no hotely lafo indrindra eto amin'ny firenena. Saingy ny antsasany dia ny antsasaky ny zavatra azonay entina any Oman na Thailand.
Tena fanandramana izahay. Manana programa divay miavaka isika. Manana fandaharam-pahaizana mahafinaritra izay mandeha lavitra eny amin'ny spa.
Nisokatra ho an'ny fahombiazana lehibe izahay. Ny ririnina dia mazava ho azy fa ny faran'ny vanim-potoana fa ny voalohan'ny volana Desambra sy ny volana Janoary dia nampiakatra avo roa heny ny zavatra nomaninay hatao ary namaly ny vahoaka tsara
F: Mieritreritra ireo toerana hafa any Portiogaly ve ianao?
A: Mientanentana be momba ny ho avy isika ary noho izany dia mijery ireo fahafahana any Lisbonne sy any amin'ny faritra hafa any Portogaly amin'ny karazana cluster. Ny toerana hafa dia samy hafa tanteraka amin'ny Douro. Ary azo antoka, ny Amerikana iray izay manao ny Douro sy Porto dia hanao Lisbonne. Noho izany dia tiantsika ny afaka hiara-manambatra azy rehetra.
F: Ahoana ny amin'ireo tanàna Eoropeana hafa?
A: Nosoratanay Six Senses Residences Courchevel, iray amin'ireo toerana mahafinaritra indrindra any Frantsa. Tsy hotely, fa trano. Azo zaraina izany. Tsy manana ny serivisy rehetra izahay fa manana fiaramanidina. Tsy manana trano fisakafoanana izahay, fa afaka misakafo maraina.
Manana spa sy dobo goavana izahay. Hanokatra ny spa amin'ny 2016. Nefa afaka mamoaka boky izy ireo ankehitriny. Ao amin'ny tranonkalanay izany.
F: Inona avy ireo drafitra fanitarana hafa azonao lazaina anay?
A: Italia mazava ho azy. Te ho any Londona ihany koa aho. Mifantoka amin'ny toerana maromaro ahafahantsika mitondra ny soatoavin'ny marika mankany amin'ny tanàna amin'ny fomba manan-danja. Tsy voatery hanao trano fandraisam-bahiny fotsiny. Saingy ireo tanàn-dehibe izay misy fialam-boly toy ny New York, London, Shanghai Hong Kong, Tokyo.
Q: Six Sense dia tena manavaka ny tenany ho marika fampakaram-bady. Tena zava-dehibe ve izany?
A: Isika rehetra dia momba ny hatsaran-tarehy. Tsy misy olon-kafa manao izany. Tsy fantatro ny antony hafa noho ny asa mafy. Tsy mpandray anjara goavana be izany. Mahasoa. Saingy misy orinasa maro ao an-hotely mieritreritra fa be loatra ny mifantoka aminy. Mieritreritra isika fa tsy ampy ny teboka. Manana programa havanana ianao, handefa ny fisotroan-drononony ianao, hitondra ny tahan'ny salantsalany ianao ary hitondra fiarandalamby. Hitantsika fa ny hatsaran-tarehy dia kisendrasendra goavana ho an'ny fototry ny raharaham-barotra.
Q: Fahasalamana dia lasa fehezanteny lehibe ao amin'ny indostrian'ny vahiny. Inona no dikan'io hevitra io aminao?
A: Miala lavitra izahay. Ny biometrika, programa yogi, saina, vatana, fanahy, fomba fiainana, fitondran-tena. Afaka miresaka momba izany mandritra ny ora maro aho. Manana programa sasantsasany izay mahaliana antsika isika izay noforoninay. Miara-miasa amin'ny dokotera maromaro izahay. Manana sakafo amin'ny sakafo izahay. Ny iray dia avy any Palm Springs, mpandidy fo mpandidy fo. Nalahelo izy rehefa nanapaka ny olona ary nanatona ny sakafo haniny. Nanampy antsika hanao ny tari-dalan'ny sakafo mahazatra antsika izy.
Manana mpitsabo matory isika. Ny iray amin'izy ireo dia mitarika ny fandaharam-potoana torimaso ao Harvard. Mpitsabo matory iray hafa avy any Californie. Napetrakay ny olona amin'ny programa torimaso.
Azonao atao ny miresaka amin'ny olona 100 ary mahazo hevitra 100 samihafa momba ny dikan'ny hatsaram-panahy. Vitsy ihany no hiresaka momba ny torimaso. Ary ny torimaso no fotaka.
Ny fandaharana natombokay dia nanomboka tamin'ny fandriana iray. Efa roa taona sy tapany izao no noraisinay mba handoavana ny fandriana. Manana tovolahy iray any Angletera amin'ny fametrahana fandriana any Devon miaraka amin'ny volon'ireo torimaso voajanahary. Ny torimaso tsara dia misy antony maromaro. Ny tena zava-dehibe iray dia ny faharetan'ny vatana. Ny olana amin'ny ankamaroan'ny fandriana dia tsy avelany hivoatra ny hafanana. Manana boaty misy loharano vita amin'ny banga izahay mba hahafahan'ny fahavoazana mandao ny fandriana. Io ihany no mandeha amin'ny lamba firakotra. Mampiasa tavy fanosotra voajanahary izahay, izay mifangaro kakazo sy eucalyptus izay mamela ny vatan'ny rivotra.
F: Moa ve tsy tsara ny foto-pisainana?
A: Eny, ary tsy miteny aho fa manana ny valiny rehetra izahay. Saingy ny zava-misy dia mandany fotoana betsaka, vola ary angovo isika amin'izany. Izany no zavatra tiantsika. Mangiriritra izany izahay. Mampiasa fitaovana iray izay misy tontolo iainana matory isika. Mampihena ny tabataba fotsy izy io izay hanampy ny olona hatory tsara kokoa. Manana fitaovana hafa izay manao zavatra mitovy amin'ny hazavana isika. Maro ny singa manodidina ny fandaharanay torimaso.
F: Lazao anay momba ny fandaharanasa jet.
A: Ny biraonay ao Harvard dia manao ny fandaharan'asan'ny jet ho antsika. Raha mandroso ianao ary mandroso lavitra, dia afaka manantona anareo amin'ny programa iray izay manomboka efatra na dimy andro alohan'ny hialana. Ny jiro Jet dia mavesatra indrindra momba ny fanaraha-maso ny hazavana. Tsy tanteraka tanteraka, fa indrindra.
Q: Tao amin'ny indostrian'ny hotely ambony ianao nandritra ny asa be indrindra. Sarobidy kokoa noho ny hatramin'izay ve ny hijoro amin'ny fifaninanana?
A: mieritreritra aho izany. Izaho dia 15 taona tamin'ny Four Seasons. Tiako ireo tovolahy ireo. Saingy tena manahirana amin'ny lamaody nentim-paharazana aho. Ritz, St. Regis ary Seasons Four. Manome traikefa ambony izy ireo. Saingy izy rehetra dia lasa zavatra mitovy. Noho izany ny fitomboan'ireo orinasam-pitaterana kely kokoa sy be mpividy entana izay tsy mitongilana any amin'ny tsena.
Ny mpanjifany amin'izao fotoana izao dia tsy dia liana loatra mikasika ny fiarovana amin'ny fiarovana ny marika lehibe. Te-hientanentana izy ireo, te-hanana fiainana, ary tena maniry ny traikefa. Tsy mitovy ny entana. Heveriko fa izany no manome ny orinasa toy ny ahy amin'izao fotoana izao fa tsy mbola nisy taloha.
Miaraka amin'ny teknolojia sy fizarazarana fizarana dia tsy voatery ho orinasa goavana ianao mba hampisy fiantraikany. Raha mbola mahatakatra ny fizaràn'ny fizarana. Raha manao izany ianao, dia tokony.
Noho izany, mihevitra aho fa ny ho avy dia ireo orinasa madinika satria tsy dia be loatra amin'ny demografika intsony. Momba ny psychicographic. Toy ny toe-tsaina. Tsy maninona raha 20 taona ianao na 70 taona.
Q: Ho an'ny mpanolo-tsain'ny olona te hahalala ny marikao, inona no torohevitra azonao omena azy ireo?
A: Ny fomba tsara indrindra hahafantarana anay dia ny hanana hotely eto. Noho izany dia mijery tetikasa any Manhattan, Palm Springs, Caroline South Carolina, Utah, The Bahamas, ary Barbados amin'izao fotoana izao isika. Manana fifanarahana eto Nicaragua izahay, eo an-dalam-panorenana any. Izany no mahatonga ny iray amin'ireo toerana mafana manaraka.
F: Any amin'ny toerana hafa any Amerika Latina izay eritreretinao?
A: Panama sy ireo nosy Panama. Ny tanànan'i Casco Viejo taloha dia ny ho faty. Izany no ifantohana. Kolombià, Ecuador. Arzantina, Brezila. Bilaogy goavana i Brezila. Tena be resaka ireo. Ny lohahevitry ny fampandrosoana dia antsasaky ny Espaniola, ny antsasany Meksikana. Mipetraka any Bangkok miaraka amintsika izy, saingy mazava ho azy fa tena tia azy.
Raha manontany ahy ianao hoe aiza no misy ny fifantohan-tsainay, dia hilaza ny Amerika aho. Manana fifantohana marina izahay any Amerika Afovoany sy Atsimo. Tena ao ambanin'ny hotely izy ireo.
F: Satria miorina ao Bangkok ianao, hampitombo ny fitsidihanao any amin'ireo firenena ve ianao?
A: Mila mihetsika matetika isika. Mila eto isika. Ny orinasanay Etazonia dia 12-15 isan-jaton'ny totalinay. Ny Amerikanina dia mandeha mankany Vietnam, Thailand ary ny Maldives. Tsy hoe tsy fantatray akory izahay. Tsy hoe fantatsika loatra izany.
Arakaraky ny fotoana lanintsika mandalo eto dia hahomby kokoa isika. Ny tompon'ny orinasa teo aloha dia tena nifantoka bebe kokoa tamin'i Eoropa. Angletera, Frantsa ary Alemana no tsenantsika telo lehibe, saingy tsy ilaina izany.
Ny Air France dia fantatra amin'ny fananana fifandraisana tsara indrindra amin'ny tanàn-dehibe any Eorôpa. Jereo ireto fampiasana tsara indrindra Amerikana ireto.
Torolalana amin'ny dingana arahina amin'ny fitarainana any amin'ny Hotel
Toro-làlana ho an'ny Travel Travel noho ny fanavaozana efitrano malalaka
Top 10 Cities ho an'ny Travel Travel tany Etazonia sy any ivelany
Torohevitra momba ny toeram-ponenana
Relais + Chateaux: Elegant, trano fisakafoanana maizimaotra izay tia fitiavana Luxury
Ny lakolosy bronze avy any Cosanti: Tsy maintsy mividy fahatsiarovana ao Arizona
5 Zavatra atao any Jackson Heights, Queens
Top Reno Sushi Restaurants
Tafika Repoblikan'i Irlandy - IRA
Tapa-kevitra ny hanao alohan'ny hanombohana ny fandriam-bahiny sy ny sakafo maraina
Ny 9 tsara indrindra ao Santiago ao 2018
Andro iray tao amin'ny valan-javaboahary Cuyahoga Valley, Ohio
12 Zavatra Manan-tantara Atao any Toronto Ity Fara Andro
Famakafakana ny sehatry ny sakafo an-dalàmny alina ao Lebuh Chulia, Penang
Inona ny Wifi?
Taom-baovao Sinoa tany Los Angeles
Oklahoma Pride Gay Gay 2016